Onye isi AU akatọọla ogbunigwe ahụ a tụrụ na mba Burkina Faso
Aka Akparala Otú Nwoke Tigburu Nwunye Ya...
Ndị Uwe Ojii Ngalaba nke Steeti Naíjà anwụchịkọla Umar Tambari gbara afọ iri atọ maka itigbu nwunye ya, Hauwa, o were bụrụ onye nwụrụ anwụ maka nnupụisi.
Guchaa Akuko a Guoo Akuko Ndi Ozo
Otu Egwu Bọọlụ Ala Anyị Akwadowela...
Otú egwu bọọlụ ala anyị, Super Eagles, ebidola nkwadebe n'ebe ọ kpụ ọkụ n'ọnụ maka asọmpi itozuoke iji were sonye n'iko mba Afrịka nke afọ puku abụọ na iri na iteghete n'ụbọchị Fraịdee megide ndị òtù ha bụ ndị mba Seychelles na ama egwuregwu Stephen Keshi, dị na Asaba dịka ndị egwu bọọlụ mmadụ iri abụọ na atọ sonyere na ya bụ nkwado nke onye nọ n'isi ya bụ Gernot Rohr.
Ụlọ Ikpe: Ụzọ Kachasị Mma Ịji Were Nweta Mmeri N'Ntuliaka Magomago Juru N'Ime Ya...
Onye zọrọ osote onyeisala n'ala anyị n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party n'abalị iri abụọ na atọ nke ọnwa Febrụwarị, Maazị Pita Obi, kwuru na mkpebi iji were maa ntụliaka aka ahụ àká n'ụlọ ikpe bụ ụzọ ka cha mma iji were nweta mmeri.
Mmadụ Iri Abụọ Anwụọla ma bụrụkwa Ndị Merụrụ Ahụ na Ihe Mberede...
Ọtụtụ ndị mmadụ atụfuela ndụ ha ebe ndị ọzọ bụzi ndị nwetagasịrị ihe mmerụ ahụ dị iche iche n'ihe mberede ahụ mere na Ọnịcha, obodo ahịa nke Steeti Anambra. Ya bụ ihe mberede mere ka mkpụrụ ụbọchị abụọ ụlọ elu dị ogogo atọ dachara na Steeti Lagos.
Ntụliaka Ghere Anya Oghe Ga-Enyere Ala Anyị Aka N'Otito...
Onye zọrọ osote onye isi ala na ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party nke ọnwa Febrụwarị ụbọchị iri abụọ na atọ, n'afọ puku abụọ na iteghete na Ntụliaka nke onye isi ala, bụ Maazị Pita Obi, ekwuola na o nweghị obodo ga-eto eto ma o nweghị ezi ụzọ pụtara ìhè ma ghere anya oghe n'usoro nhọpụta ọchịchị.
Mmadụ Iteghete, tinyere Ụmụ Aka, Anwụọla na Ọgbaghara Dị na Kaduna...
Ozu mmadụ iteghete, tinyere ụmụ aka, bụ nke ndị ọlụ nchekwa butegoro n'ọgba aghara ahụ ebe agbara ọtụtụ ụlọ ọkụ n'otu obodo.
PDP na Atiku Achikọtala Ndị Aka Ebe Karịrị Narị Anọ N'Ọgụgụ...
Otú ndọrọndọrọ ọchịchị People's Democratic Party na onye zọrọ onyeisiala n'okpuru ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị na ntụliaka ahụ emere na ọnwa Febrụwarị, abalị iri abụọ na atọ n'ime afọ puku abụọ na iteghete, Alhaji Atiku Abubakar, kwuru n'ụbọchị Mondee na ha achịkọtala ndị aka ebe karịrị narị anọ ga-agba ama N'Ọgbakọ Ụlọ Ikpe Mkpesa N'ahụ maka Ntụliaka Onyeisiala, bụ ebe ha ga-anọ were maa ugo ahụ nke Onyeisiala Muhammadu Buhari tùrù na otu ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ All Progressive Congress aka n'ihu na ntụliaka ahụ emere.
E Jidela Mmadụ Iri Atọ Na Ise n'Anambra Maka Ọgwụ Ike...
Site na njikọaka ọnụ nke ụlọ ọrụ ahụ na-ahụ maka ibu agha megide ọgwụ ike n'ala Nigeria, bụ 'National Drug Law Enforcement Agency' (NDLEA), ndị ọrụ agha ala anyị, ndị uwe ojii, ndị ọrụ ụlọ mkpọrọ, ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka mbàtá na ọpụpụ n'ala anyị, bụ 'Nigerian Immigration Service' na ndị ndị ọrụ nchekwa mmadụ nkịtị, bụ 'Nigeria Security and Civil Defence Corps' a nwụchikọọla mmadụ iri atọ na ise a na-enyo ènyò na ha na-etinye aka n'ihe metụtara ọgwụ ike.
Ala Nigeria Ahọpụtala Ndị Gọvanọ Na Ndị Omebe Iwu Steeti Dị Iche Iche...
Dịka a chịkọtara nhọpụta ọchịchị nke ahọ 2019 n'ala bịara n'isi njedobe, a họpụtala ndị gọvanọ ọhụụ na ndị omebe iwu ọhụụ na steeti dị iche iche.
Ndị APGA n'Ọnịtsha North Emee Ngagharị Iwe Maka Mpụtara Nhọpụta Ọchịchị...
Imirikiti ndị otu ndọrọ ndọrọ 'All Progressive Grand Alliance' (APGA) sitere ọgbọ nta nkwàdo Ọnitsha North dị na steeti Anambra emeela ngagharị iwe bànyere mpụtara nhọpụta ọchịchị ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu ahụ e mere n'ọgbọ nta nkwàdo ahụ n'abalị iteghete nke ọnwa March ahọ a.
Onye isi oche otu jikọrọ mba Afrika, bụ Moussa Faki Mahamat, ezipụla ozi n’ikuku ma katọọ ogbunigwe ahụ ndị omekome tụrụ n’Ouagadougou, isi obodo mba Burkina Faso.
N’ozi ahụ Maazị Mahamat zipugara, O kwuru hoha si na ya katọrọ nwakpo ahụ mere na Burkina Faso:
“A katọrọ m nkusu a mere na Ouagadougou. E jikwa m obi nwute akasi gọọmenti Burkina Faso yana ndị obodo ahụ niile obi n’oge nsogbu di etu a.”
Ọ gara n’ihụ kwuo na ogbunigwe ahụ a tụrụ na-egosi ụzọ ọhụrụ ndị agha iyi egwu si emepka ndị mmadu ahụ.
Ákwá Arịrị Dịka Ụlọ Elu Dàrà na Steeti Lagos...
Ọtụtụ mmadụ bụ ndị atụrụ egwu na ha anwụọla n'ụbọchị Wednezdee dịka otu ụlọ elu dị ogogo atọ dara na No. 63 Massey Street, Ita Faji, Lagos Island oge ọ na-akụ elekere iri nke ụtụtụ.
Gọọmenti Anambra Amalite Ịrụ Ụzọ Ọzọ Na Nnewi...
Gọọmenti steeti Anambra amàlitela ọrụ okporo ụzọ ọzọ n'Ụmụdim Nnewi, dị n'okpuru ọchịchị Nnewi North. Ya bụ ọrụ ngo bụ nke a malitere n'okporo ụzọ ahụ siri na mpaghara ụzọ Innoson dị n'Uru wee gaa Ụmụdim Nnewi, ma bụrụkwa nke dị kilomita atọ.